पत्ता लाग्याे भगवान शिवको १३ रहस्य… पढ्नुहाेस्
पाेखरा ९ श्रावण-याे साउन अर्थात भगवान शिवको महिना हाे र यस महिना शिवकाे पूजा गर्न गरिन्छ ।
यस महिनालाई पूजाआज, भक्तिभाव, श्रद्धाको महिना पनि भनिन्छ । साउनमा भगवान शिव पूजाआजा गर्ने, सात्विक भोजन गर्ने, उपवास बस्ने, मठमन्दिर जाने गरिन्छ । साउनको सोमबारलाई विशेष दिन मानिन्छ ।भ्गवान शिवको अनेक नाम छ । भषवान शिव फागुनकाे शिव रात्रिमा पिन पूकारिन्छ ।
शंकर, भोलेनाथ, महादेव, आदिनाथ । यस्ता थुप्रै नामले भगवान शिवलाई पुकारिन्छ । भगवान शिवको स्वरुप जति अर्थपूर्ण छ, उनको नाम उत्तिकै रहस्यमयी पनि । अतः यहाँ भगवान शिवको ३५ रहस्य उल्लेख गरिएको छ । भगवान शिवलाइ सबैले पुकारनि गर्छन् ।
२. शिवको शिष्य
३. देवता र असुर दुबैको पि्रय शिव
शिव भगवान भन्नसाथ कम्मरमा बाघको छाला बाँधेका, एक हातमा डमरु र अर्कोमा त्रिसुल बोकेका, सर्पको माला लगाएका, तीन नेत्र भएका, जटाधारी आकृति सम्झन्छौ । आखिर शिव भगवानलाई यस्तो रुप दिनुको के अर्थ होला ? शिव स्वरुपको रचना विशिष्ठ एवं अर्थपूर्ण छ ।
शिवजीको जटालाई वायुमण्डल, त्यसमा सिउरिएको चन्द्रमालाई मन, डमरुलाई ध्वनी एवं संगीतको प्रतिक मानिएको छ । उनले कम्मर मुनी बाघको छाला बाँधेका छन् । बाघ हिंसाको प्रतिक हो । त्यसलाई कम्मरमुनी बाँध्नुको अर्थ हिंसालाई दबाउनुपर्छ भन्ने हो ।
त्यस्तै, शिवजीको आकृतिमा समानन्तर तीन वटा आँखा हुन्छ । बीचको तेस्रो आँखालाई अलौकिक सृष्टिको प्रतिक मानिन्छ । त्रिसुलको तीनवटा शूलले उदय, संरक्षण र विनासको संकेत गर्छ । सर्पले पर्यवरणमा रहेको विषाक्त पदार्थलाई आफ्नो गलामा समाहित गर्छ । शिवजीले सर्पको माला लगाउनुको अर्थ पनि पर्यावरणको शुद्धतासँग जोडिएको छ । यस्ता थुप्रै नामले भगवान शिवलाई पुकारिन्छ ।